Wararkii ugu dambeeyey geerida Osama Bin Ladin (Warbixin dhinacyo badan+ Sawiro) – SBC
Wararkii ugu dambeeyey geerida Osama Bin Ladin (Warbixin dhinacyo badan+ Sawiro)
Posted by editor on May 2, 2011 Comments
Warbixintan waxaan ku eegi doono warar kala duwan oo aan ka soo xiganay sirdoonka & diblumaasiyiinta caalamka iyadoo si gaar ah aan toosh ugu ifin doono wararka ku saabsan geerida Bin ladin & sida ay u dhacdey.
Ma dhab baa geerida Bin Ladin?
Qaabkee u dhacay hawlgalka lagu diley Bin Ladin?
Ciidamada ka qayb qaatey hawlgalkaasi?
Bin Ladin caafimaadkiisu sidee buu ahaa ka hor weerarka?
Dawlada Pakistan war ma ka haysay weerarka lagu diley Bin Ladin?
Magaalada ama xaafada lagu diley Bin Ladin sidee buu ugu noolaa maxaase keenay in la ogaado halkaasi in uu ku sugan yahay?
Yaa la deganaa guriga?
maydkii Bin Ladin xagee ku dambeeyey?
Goormuu bilowdey hawlgalkan lagu diley Bin Ladin?
Bin Ladin Ma la isku dayey in nolol lagu qabto?
Weerarkaasi khasaare ma ka soo gaarey ciidamadii Mareykanka
Osama Bin Laden oo ahaa hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida ayaa la xaqiijiyey in lagu diley weerar ka dhacay magaalo ku taal waqooyiga caasimada Pakistaan ee Islamabad una jirta 60 mile, waxaana la xaqiijiyey in hawlgalkaasi ciidamada geystey ay ahaayeen ciidamo gaar ah oo si gaar ah loo tababaray kuna hubaysnaa hub casri & qalab kale oo aad u tayo sareeya. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa daboolka ka qaaday warka ku saabsan geerida Obama isagoo u xaqiijiyey dadka Mareykanka & aduunka in la soo afjarey hawlgal dheer oo mudo soo socdey. 54 sano jirka u dhashay Sacuudiga balse laga xayuubiyey muwaadininada dalkaasi waxaa la sheegay in weerarka lagu diley uu soo socdey ilaa iyo bishii August ee sanadkii hore iyadoo hawlgalkaasi aan waxba lagala socodsiin dawlada Pakistaan, taasi oo u muuqanaysay in aan lagu qabin kalsooni iyadoo hawlgalka fulintiisa iska kaashadeen ciidamada Mareykanka ee ku sugan Pakistaan, sirdoonka Mareykanka ee CIA-da & waliba ciidamo si gaar ah tababar loogu siiyey dilka hogaamiyaha Al-Qaacida. Helitaanka xogta sirdoonka ee guriga Bin Ladin ku sugnaa.
Ciidamadan waxay ku socdeen warar sirdoon oo mudo isha lagu hayey isla markaana si weyn loo hubiyey jiritaankooda in halkaasi uu ku sugan yahay Bin Ladin, waxaa mudo 8 bilood ah lala socdey dhaqdhaqaaqa guriga sadexda dabaq ka kooban ee la sheegay in uu ku sugan yahay Bin Ladin. Warka ku saabsan in Bin Ladin gurigaasi ku sugan yahay waxaa la sheegay in ciidamada sirdoonka Mareykanka ay heleen bishii August waxaana la xaqiijiyey in gurigaasi uu ku yiil xaafada Bilaal ee magaalada Abbotadad.
Guriga wuxuu ahaa guri laba dabaq ka kooban wararka sirdoonka waxaa sii xoojiyey dadka xaafada degan oo sheegay in aanay waligood arag gurigaasi oo xitaa qashin banaanka looga soo bixinayo.
Laakiin dadka xaafadu sinaba uma aaminsaneyn in Bin Ladin uu ku noolyahay gurigaasi balse sirdoonka Mareykanka waxay gurigaasi agagaarihiisa ku xirteen kaamirooyin la sheegay in lagula socdey dhaqdhaqaaqa waxa galaya ama ka baxaya.
Laguma aqoon ciidamada Mareykanka sugitaan intaasi le’eg oo la xiriira dadka la doon doonayo in la sugo mudo dheer in talaabo laga qaado, laakiin hawlgalkan wuxuu ahaa mid waqti la siiyey taasi oo muujinaysa in laga cabsi qabey in lagu dhaco ceeb iyo fadeexado hor leh oo horey ay ula kulmeen sirdoonka Mareykanka oo la xiriira in Bin Ladin iyo saaxiibadiis lagu sheego joogitaanka goobo kala duwan.
Qaabka weerarku u dhahay, hubka la adeegsadey & ciidamada hawlgalka fuliyey
Weerarka waxaa fuliyey ciidamo ay u dhaxeyso tiradoodu 20 ilaa 40 kuwaasi oo la socdey afar diyaaradaha qumaatiga u kaca waxaa la sheegay in ciidamadan ay ka soo duleen saldhig ciidan oo Mareykanku ku leeyahay Paksitaan.
Gaar ahaan qoriga M4 carbin oo ah nooca ay ka dhacaan bambooyinka & rasaasta aan dhaawaca laheyn.
Qoriga nooca loo yaqaan MP5 9mm oo ah qori aad u gaaban oo qaadashadiisu sahal tahay kaasi oo ah nooca daran dooriga u dhaca.
Baastooladaha nooca 9mm oo aan waxba ka dhicin qoriga caadiga ah
Qoryaha loo yaqaan PSG-1 oo ah nooca toogashada ku fiican oo ay ku rikaban tahay diirada ama waynso ama soo dhaweyso.
Qalabka habeenkii wax lagu arko ee indhaha la gashado kuwaasi oo mudiga ka dhigi kara in qofku sida maalintii wax u arko (Night Vision Goggles)
Miinada la jiheeyo ee loo yaqaan (Directional Mine),
Radio singal loogu tala galay in uu hawada ka saaro isgaarsiinta 100 meter, isla markaana awood u leh in uu shucaac ku abuuri karo mobilada iyo taararka ama wax loo yaqaan HF.
Ciidamada hawlgalka sameeyey waxay kala ahaayeen laba unug oo kala socdey Delta Force oo ah ciidan si gaar ah u tababaran oo la aasaasay sanadkii 1977-kii, ciidamadaasi waxay qayb ka ahaayeen ciidamo hawlgal ka sameeyey meelo badan oo dunida ka tirsan, sida magaalada Muqdisho sanadkii 1993-kii walow hawlgalkaasi ay ku fashilmeen, waxay ciidamadan ka qayb qaateen hawlgalada Mareykanka ee Ciraaq & Afgaanistaan. Ciidamada kale ee hawlaglka ka qayb qaatey waxaa lagu magacaabaa Navy Seal oo ah ciidan si gaar ah loogu tababaray fulinta hawlgalada gaarka ah ee dilka iyo qaarajinta ah ciidankan waa kuwa ka dagaalami kara dhulka, badda & cirka, waxaana ay ka qayb qaateen dagaalkii labaad ee aduunka, dagaalki Vietnam iyo dagaalada Ciraaq & Afgaansitaan. Fulinta hawlgalka waxaa si toos ah u amray madaxeynaha Mareykanka Barack Obama isagoo qalinka ku duugay dilka Bin Ladin ka dib markii la helay muuqaalo video ah oo muujinaya in Bin Ladin gurigaasi labada dabaq ah ku sugan yahay.
Madaxweyne Obama wuxuu sheegay in ay xaqiiqsadeen todobaadkii hore in Bin Ladin guriga ku sugan yahay isla markaana ay go’aansadeen in la dilo ama la qabto. Warar dhanka sirdoonka ayaa sheegaya in sirdoonka Mareykanka ay ka warheleen in guriga ay ka sugan yihiin ciidamo aad u hubaysan ayna adag tahay in si sahal ah lagu galo gudaha gurigaasi, waxaana sidoo kale la helay in guriga ay ku sugan yihiin dad rayid ah oo isagu jira haween & caruur.
Guriga hawlgalka ka dhacay wuxuu lahaa beer weyn, waxaa kaloo ku yiil teendhooyin dhawr ah kuwaasi oo la sheegay in Bin Ladin mar mar uu fariisan jirey, waxaa kaloo gurigu uu lahaa godad waa weyn oo dhulka ka qodan.
Guriga oo ahaa guri aad uga weyn guryaha xaafadaha ma laheyn wax Internet ah iyo telefoon balse waxaa dusha ka saaran diish weyn oo ay u muuqaneysay in Telefishinada laga daawado. Gurigu ma laheyn daaqado fara badan, wuxuu ahaa guri sideed jeer ka weyn guryahaa ku dhaw, wuxuu ahaa guri leh silig aad u dheer oo cabirkiisu gaarayo 3.6 m oo ku xirnaa darbiyada guriga, waxaana lagu qiimeeyey gurigaasi $ 1 Milyan oo doolar.
Wararku waxay sheegayaan in Bin Ladin guriga ay la deganeyd xaaskiisa ugu yar xaasaskiisa & wiil uu dhaley sidoo kale waxaa la joogay ninka maaliyada u qaabilsan.
Hawlaglka oo dhacay xili habeen ah xaley xiliga Afrikada Bari ciidamada gaarka ah ee Mareykanka waxay ku degeen guriga laakiin intii aanay dhulka soo gaarin waxay la kulmeen tacshiirad xoogan & garnaylo ka dhacayay qoryaha garbaha laga rido, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in mid ka mid ah diyaaradihii hawlgalkaasi ka qayb qaatey ay soo rideen gantaalihii ay ridayeen ciidamadii difaacayey Bin Ladin. Telefishinka Geo News ee laga leeyahay wadanka Pakistaan wuxuu si toos ah u baahiyey burbur & qiiq ka soo baxayay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee hawlgalkaasi ka qayb qaatey gaar ahaan nooca khumaatiga u kaca.
Hawlgalka oo ujeedkiisu ahaa in Bin Ladin nolol lagu qabto isla markaana la aaminsanaa inay suurtagal tahay waxaa la sheegay in taasi aanay noqon mid suurtagal ah maadaama iska caabin xoogan ay ka timid dhanka xoogagaii difaacayey Sheekh Bin Ladin, waxaana la sheegay in iska caabinta oo socotey daqiiqado ka dib ciidamada Mareykanka ay adeegsadeen bambooyin culus oo watey qiiq sun ah oo daqiiqado gudahood qofka ka dhigaya mid miyir la’aan ah, taasi oo saameysay maleeshiyadii Bin Ladin daafacaysey ee ku sugnaa daafaha & oogada sare ee guriga. Ciidamada Bin Ladin daafacayey waxaa lagu tiro ahaan lagu qiyaasayaa 50 nin oo aad u hubeysan waxaana la sheegay inay aahayeen ilaalada gaarka ah ee Bin Ladin oo sida aadka ah loogu kalsoon yahay.
Ciidamada Mareykanka waxaa u suurtagashay inay dusha sare kaga soo degaan guriga isla markaana ay gudaha u soo galaan qolalka guriga iyo waliba godad dhulka hoostiisa ka sameysnaa.
Warar dhanka sirdoonka ah ayaa sheegaya in Bin Ladin iyo ciidamada Mareykanka ay toos ah isku arkeen waxaana Bin ladin oo wata qori darandooriga u dhaca ay ciidamda isku arkeen qolkiisa jiifka iyadoo ciidamadu ay dalbadeen in uu isdhiibo balse taasi Bin Ladin wuu ka dhageo adegaygay waxaa jira war aan la hubin oo sheegaya in uu rasaas la beegsdey ciidamadaasi kuwaasi oo markii dambe madaxa ka toogtey isagoo halkaasi ku dhintey.
Meydka Bin Ladin iyo xaqiijintiisa
Ilo wareed oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Bin Ladin meydkiisa lagu xaqiijiyey ka dib markii laga qaatey dheecaanka hida sidaha ee loo yaqaan DNA, waxaana la sheegay in dawlada Sacuudiga loo soo bandhigay in ay meydka la wareegto balse ilo wareed diblumaasiyadeed ayaa sheegaya in Sacuudigu uu diiday in uu meydka Bin Ladin la wareego taasi oo keentey in lagu duugo badda dhexdeeda. Sababta meydka Bin ladin sida deg deg ah loogu duugay lama oga waxaase lagu sheegay qiimeyn shareecada Islaamka oo qabta in qofka Muslimka ah meydkiisa la duugo 24 saac gudaheed.
Lakaiin shaki badan ayaa laga qabaa sababta la sheegay in meydka loo duugay iyo waliba in xitaa Mareykanku ay soo bandhigi waayaan meydka Bin Ladin iyadoo la ogyahay markii ay dileen wiilashii Sadaam Xuseen ee Qusey & Udey in meydkooda Telefishinada laga baahiyey.
Sidoo kale qabashadii Sadaam Xuseen ayaa si la mid ah saxaafada Mareykanku ugu soo bandhigeen, waxaana jira shaki laga qabto arintaasi.
Dadka ku dhintey weerarka
Mareykanku waxay sheegeen in sadex qof weerarkaasi lagu diley kuwaasi oo uu ku jirey wiil uu dhalay Osama Bin Ladin.
Al-qaacida wali kama hadlin oo ma aanay xaqiijin mana beenin warka sheegaya in Osama Bin Ladin la dilay.
Caafimaadka Bin Ladin
Osama Bin Ladin caafimaad ahaan mudo warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxayey iyadoo ay jireen warar sheegayey in uu goor hore geeriyoodey isagoo u geeriyoodey cudurka duumada ama Malaria.
Warar kale ayaa sheegayey in Bin Ladin uu xanuunsanaa mudooyinkii ugu dambeeyey oo uu hawlgab noqdey isla markaana aanu wax shaqo ah ku laheyn hawlgalada Al-Qaacida ee ka soconaya dunida dacaladeeda.
Shakiga ku gadaaman dhimashada Osama Bin Ladin
Dadka siyaasada la socda waxay sheegeen in uu jiro shaki ku gadaaman geerida Osama iyadoo la is waydiinayo xiliga dhimashada ama weerarka lagu soo beegay iyadoo waliba la leeyahay waxaa laga war hayey in Bin Ladin uu ku sugan yahay gurigaasi ilaa bishii August ee sanakdii hore iyadoo lagu soo beegay xili Mareykanka uu ka jiro kicin siyaasaded oo halis galin kara siyaasada Obama & in dib loogu sdoo doorto aqalka cad 4 sano oo kale.
Xisbiga Madaxweyne Obama uu ka soo jeedo ee Dimuqraadiga waxay lumiyeen aqlibiyadii labada aqal ee Mareykanka looga taliyo sida Senate-ka & Congress-ka iyadoo ay la wareegeen xisbniga mucaaradka ee Jamhuuriga taasi oo shaki galisey in Obama dib loo soo doorto.
Hadaba dad badan ayaa si waydiinaya in Bin Ladin mar hore uu dhintey isagoo waliba caafimaadu xumo u dhintey isla markaana la qarinayey oo la doonayey in lagu soo beego munaasabad gaar ah.
Xiligan oo dadka Mareykanka ay si weyn uga daaleen balanqaadyada faraha badan ee aanay waxba ka hirgalin ee Obama uu sameeyey xiligii doorashada uu ku jiray, ayaa waxaa muuqanaysa in dadka Mareykanku aanay codkooda siin doonin Barack Obama gaar ahaan dadka dhalinyarada ah iyo kuwa laga tirada badan yahay oo Obama codka siiyey doorashadii 2008-dii ayaa hada waxay quus ka joogaan balanqaadyada Obama ee aanay waxba ka soo naasa cadaan. Diblumaasiyiinta arimaah siyaasada falanqeeya waxay leeyihiin Obama fursad uu dadka Mareykanku ku beerlaxawsado ayuu helay oo ah in uu u sheego in ninka ay ugu neceb yihiin aanu dib dambe qatar ugu noqon doonin oo la dilay taasi oo ah warka ugu farxada badan dadka Mareykanka, taasi oo xiligan ku soo beegitaankeeda ay keenayso in Obama uu helo taageero fara badan maadama uu qabtey wax uu qaban waayey Bush-kii isaga ka horeeyey.
Al-Qaacida ma dhimatey hadii Bin ladin dhintey ?
Sirdoonka & diblumasiyiinta caalamka waxay isku raacsan yihiin in Al-qaacida aanay la dhiman Bin Ladin oo ay waliba xiligan ka awood badan tahay markii ay soo shaac baxdey oo aheyd 1993-kii ama sanakdii 2011-dii oo la sheegay inay fuliyeen weerarkii 9/11.
Al-qaacida sanadkii 1996-dii waxay laheyd hal xarun oo ay ku tababarato oo ku tiil Afgaanistaan laakiin xiligan waxay leedahay sida ay sheegayaan sirdoonku xarumo fara badan oo ku yaal daafaha dunida sida Yemen, Afgansitan, Ciraaq, Somalia, Waqooyiga Afrika, goobo kale oo ku yaal Aasiyada Bari & Bariga dhexe.
Bin Ladin hadalkii uu jeediyey xiligii lagu bilaabay baadi goobka
Sanadkii 1996-dii Osama Bin Ladin waxaa kula kulmay dalka Afgaansitaan tififtiraha wargeyska Al-Qudus Al Carabiya oo ka soo baxa magaalada London Abd al-Bari Atwan wuxuu u sheegay Osama wariyaha hadal la yaab leh oo ahaa “Waan ogahay inaan dhimanayo maalin uun, laakiin waxaan ku dhiman doonaa aniga oo ah mujaahid oo shihiidi doona, waligeyna isku dhiibi maayo cadowga ALLE, lagama yaabo in nolol ay igu qabtaan”.
Hadalkaasi wuxuu yimid maanta iyadoo la sheegay in Bin Ladin uu diidey in uu is dhiibo xiligii la isku dayey in la qabto laakiin uu ka doorbiday in madaxa la fujiyo oo si toos ah u dhinto ah.
Si kastaba ah ha ahaatee geerida Osama Bin Ladin waxay dunida ku yeelan doontaa raad aad qoto dheer waxaana laga cabsi qabaa in ay sii kordhaan weerarada ay geystaan kooxaha fikirkiisa aadka u taabacsanaa, waxaase aamisan in qodax ku taagneyd ay ka baxdey dadka ku dhaqan wadamada reer Galbeedka oo u arkayey in uu yahay shar & balaayo cirka laga soo tuuray.
hiba isa says:
may way hay